उपस्वास्थ्य चौकी अतिरिक्त हुलाक तथा निजी स्रोतबाट सञ्चालित मा.वि., नि.मा.वि. र प्रा.वि. विद्यालयहरू हाल साचालनमा आएका छन्। खाराको सतिपोलेमा नेपाली सेनाको ब्यारेक छ तर दैनिक जनतासँग सरोकार राख्ने प्रहरी प्रशासनको भने उपस्थिति छैन। टेलिफोन लाईन विस्तार नभएपनि सीडीएमए फोन स्काई तथा नमस्ते मोबाइल सञ्चालनमा आएको छ। विद्युत नहुँदा दियालो बाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने केहीले सोलारबाट उज्यालो पाइरहेका छन्। सहर बजारको पहुँच यातायातका हिसाबले खारा अन्य गा.वि.स.हरूका तुलनामा अघि छ तथापि विकासका सबै पूर्वाधाहरूबाट भने यो गा.वि..स अँझै पनि पछाडी नै रहेको छ। शैक्षिक रूपमा पनि यो गा.वि.स. निकै पछाडी छ झण्डै ४६ प्रतिशत यस गा.वि.स.मा साक्षर रहेको तथ्याङ्क भएतापनि उच्चशिक्षासम्म हासिल गर्नेहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ।
२०५८ सालको जनगणना अनुसार ५४२६ जनसङ्ख्या रहेको यस गा.वि.स.मा २७२६ महिला र २७०० पुरुष रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=खारा&oldid=1000550" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १०:२७, ९ अप्रिल २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।